Nkọwa nke gbọmgbọm kpuchie roba: Mgbe ala na-akpụ, maka mkpa nke mgbochi nchara, mmebi ahụ na nkwado, ọ chọkwara ọgwụgwọ elu ma ọ bụ mkpuchi, dị ka eserese, ịkwanye, ịkwanyere Teflon, mkpuchi roba, mkpuchi chromium, ịkwanye mmiri na seramiiki. ọxịdashọn. Dika nha, enwere otutu ihe dika ihe ndi na-eme akwukwo ederede (ogologo nwere ike iru ihe kariri mita 10, dayameta kariri 1500 mm), enwere obere ihe dika akpaka akpukpo oku di ...
Njirimara nke PVC roller 1. Roller conveyor (roller conveyor) kwesịrị ekwesị maka ịbuga ụdị igbe niile, akpa, pallets, wdg. Nnukwu ihe, obere ihe ma ọ bụ ihe ndị na-adịghị mma na-ebufe Transportgbọ njem na pallets ma ọ bụ igbe ntụgharị. 2. O nwere ike ibufe otu ihe dị arọ ma ọ bụ buru ibu buru ibu. 3. Ihe owuwu ahụ dị iche iche. Enwere ike kewaa usoro ọsọ ọsọ n'ime usoro ịgba ọsọ na ike na-enweghị ike n'okporo ụzọ dị ka ọnọdụ ịkwọ ụgbọala, ma nwee ike kewaa ya na ntanetị ...
Ugboro abụọ yinye ala, dịgasị iche iche, oke, nwere ike ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ. A na-ejikarị ya. Igwe obibi akwụkwọ, dịka mbipụta akwụkwọ akụkọ, bụ usoro ọsọ ọsọ nke nwere ike iwepụta karịa 6000 yaadị nke akwa ebipụtara kwa elekere. A na-akpọkwa usoro a usoro obibi akwụkwọ. Na ígwè obibi akwụkwọ, a na-ebipụta usoro na akwa ahụ site na ịkpụ ọla kọpa (ma ọ bụ rollers). Ọla kọpa drum nwere ike Wapụtara nke ọma ndokwa nnọọ mma edoghi, nke nwere ike e biri ebi nnọọ zuru ezu, adụ p ...
Enweghi ike inyeaka
Ike ala bụ a gburugburu mpịakọta akụrụngwa nke mere ndị ebu belt ma ọ bụ na-agbanwe ya na-agba ọsọ direction. Enwere ike kee ya ụzọ abụọ: draịva mbanye na draịva ahụ. The mbanye ala bụ isi mmiri nyefee ike. Na-akwọ ụgbọala ike ala na-ekewa n'ime otu ike ala (wrapping n'akuku nke belt na ike ala bụ n'okpuru 200 Celsius na 230 Celsius), multi ike ala (n'ozuzu eji maka elu ike) na abụọ ike ala (wrapping n'akuku bụ ruo 350 °). Chọrọ ...
Roller roller series ngwaahịa Nkọwapụta: ọ kwesịrị ekwesị maka ịbuga ụdị igbe niile, akpa, pallets, wdg. Nnukwu ihe, obere isiokwu ma ọ bụ isiokwu oge ụfọdụ kwesịrị ibugharị na pallets ma ọ bụ igbe ntụgharị. Ọ nwere ike ibufe otu arọ ihe ma ọ bụ ibu nnukwu mmetụta ibu. Structure: dị ka ịnya ụgbọ ala mode, ọ nwere ike kere n'ime ike ala akara na-abụghị ike ala akara, dị ka layout, ọ nwere ike kere n'ime kwụ erute ala akara, chọrọ con ...
Mmepụta nke square ala tumadi mejupụtara mbụ mbịne nke ala ahu, mbụ static guzozie, nnyonye anya kwesịrị ekwesị na ịgbado ọkụ nke aro isi, ezi mbịne na ezi ike guzozie. Ọ bụrụ na achọrọ ndidi omume, dị ka gburugburu, cylindricity na straightness, ka ọ bụrụ ihe na-erughị 0.2mm, achọrọ ka akwa grind cylindrical ma ọ bụ mpịakọta mpịakọta ka ị gụchaa mgbe emechara ya. Ọ bụrụ na achọrọ ịdị ike elu, a ga-agbakwunye usoro ọgwụgwọ ọkụ. Mgbe ala bụ fo ...
Igwe anaghị agba nchara ike ala ebu na drum mbịne igwe nwere uru nke dị mfe Ọdịdị, elu pụrụ ịdabere na-adaba adaba mmezi. Ọrụ ndị a nwere ike iwetara gị nnukwu uru ọrụ, ịghọta ọrụ ya. A na-eji akara ahịrị maka njikọ dị mfe na nzacha n'etiti ndị na-ebugharị. Ọ nwere ike na-etolite a mgbagwoju lọjistik njem usoro na otutu ala e na ndị ọzọ erute ngwá ma ọ bụ pụrụ iche igwe izute dị iche iche usoro chọrọ. Ihe nchịkọta ...
Utdị uru ahụ metụtara ihe nkedo plastik, nke gụnyere cylinder, ihe mkpuchi ngwụcha, ọkpọ ala, mkpochapụ mkpọtụ na ngwaọrụ mkpuchi mkpuchi ọkụ na ngwaọrụ na-ewepu ọkụ eletrik. The ala aro bụ cylindrical, na cylinder oghere cylindrical, na cylinder ọbọp ke mpụta n'akụkụ nke ala aro, na ọgwụgwụ na-ahazi na nsọtụ abụọ nke cylinder, na esịtidem owuwu nke ọgwụgwụ na-ekpuchi na nsọtụ abụọ na-agbanwe agbanwe, biarin na-ofu n'ime agba ...